‘कामचोर’ ठेकेदारसँग सम्झौताहीन व्यवहार
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ‘कामचोर’ ठेकेदारको सूची तयार पार्न निर्देशन दिएपछि सडकका कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारले धमाधम सूची बनाइरहेका छन् । एकाध ठाउँमा गुणस्तरहीन काम गर्ने वा विलम्ब गर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाइएको पनि छ । गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि विराटनगर सडकखण्डमा नाला बनाउँदा लापरबाही गरेको ठेकेदार कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्ति पक्राउ परे । तर कामचोर ठेकेदारमध्ये पनि ठूला नेतासम्म पहुँच भएका ठेकेदारलाई कारबाही हुन्छ कि यहाँ पनि साना माछामात्र छोपिने हुन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
मेलम्ची होस् वा नारायणगढ– मुग्लिन सडकखण्डमा तोकिएको समयममा काम पूरा नगर्ने ठूला योजनाका ठेकेदारको त के कुरा राजधानी उपत्यका वरपरकै सडकका ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम पूरा गरेका छैनन्, गरेको काम पनि गुणस्तरीय छैन । तर यी सडकका ठेकेदारको सहज पहुँच शीर्ष नेतृत्वसम्म छ । यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही होला कि उन्मुक्ति पाउलान् ? चासोसाथ हेरिएको छ ।
रूपन्देहीको सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकखण्ड चार वर्षमा पूरा हुनुपर्नेमा पाँच वर्षमा ६० प्रतिशतमात्र काम भएको छ । काठमाडौँकै त्रिपुरेश्वर कलङ्की नागढुङ्गा सडक म्याद सकिएको एक वर्ष भइसक्यो ४० प्रतिशतमात्र काम भएको छ । ढोलाहिटी –सुनाकोठी – चापागाउँ – सरस्वतीकुण्ड सडकको म्याद सकिनैलाग्दा काम शून्य अवस्थामा छ । धेरै ठाउँमा पुल निर्माण कार्यको प्रगति यस्तै गतिको रहेका समाचार आइरहेका छन् ।
मोफसलतिरको कुरा नगरौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका वा काठमाडौँ उपत्यकाका सडकको अवस्था बेहाल छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३५० सडकमा काम गरिरहेका ठेकेदारको सूची बनाएको छ, जसमा शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले अधिकांश ठाउँमा समयमा काम नगरेको पाइएको छ ।
शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले भक्तपुरको कमलविनायकबाट भत्केको पाटी हुँदै नगरकोट जाने १६ किमि सडक ०७१ को जेठबाट बनाउन सुरू ग¥यो र ०७३ को जेठसम्म बन्नुपर्ने हो तर काम गराइ हेर्दा अबको जेठमा पनि यसको काम सक्न मुस्किल छ । अझै कति वर्ष लगाउने कुनै टुङ्गो छैन । भक्तपुरको बिष्णुकुण्डली–सिद्धीकाली सडकमा पनि शैलुङसँगै ज्वाइन्ट भेञ्चरमा काम भइरहेको छ । यो खण्डको काम पनि म्याद थपेर राखिएको छ ।
राजधानीको मुख्य नाका नागढुङ्गा–कलङ्की सडक खण्डको हालत चौपट छ । यो सडकको सबै खण्डमा शैलुङको विभिन्न जोइन्टभेन्चर कम्पनीसँग ठेक्का छ । मुख्य रूपमा उसले काम गरिरहेको छ । यो सडक विस्तारमा भएको ढिलासुस्ती र लापरबाहीले स्थानीयलाई धुलो खुवाएको छ, यात्रुले सास्ती भएको छ ।
ललितपुरको ढोलाहिटी–सुनकोठी–चापागाउँ–लेले सडकको एक खण्डमा दिवा–शैलुङ जेभीले विस्तार गर्दैछ । उपत्यका सडक विस्तार आयोजनासँग भएको सम्झौता सकिन ६ महिना बाँकी छ तर अहिलेसम्म कम्पनीले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । वनस्थली – बालाजुचौकी – बोहोेराटार सडकखण्ड कहिले सकिन्छ, टुङ्गोे छैन । गोपीकृष्ण हलदेखि कपनसम्म धोबीखोला करिडोर निर्माणमा त्यस्तै ढिलासुस्ती देखिन्छ । यी ठेक्का हात पारेर समयमै काम नगर्ने सडकतर्फका केही उदाहरण हुन् । कैयौँ सडकको सम्झौताबमोजिम काम नगरी चार पाँच पटकसम्म समय थप गरेर पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
गत दशैँ अघि नै मेलम्चीको पानी यसपटक त पक्कै काठमाडौँ भित्रिन्छ भनेर आश्वस्त पारिएको थियो । दशकौँदेखि यसैगरी आश्वासन बाँडिएका थिए । पानीको अभाव भोगिरहेका काठमाडौँबासी मेलम्चीको पानीको सपना देखाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्नेहरूका शिकार मात्र भइरहे तर मेलम्चीको पानी भने आएन ।
अब त बलियो सरकार बनेको छ । काम गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ । यो सरकारले जनतालाई पक्कै झुक्याउँदैन भन्ने विश्वास थियो जनतामा । झन् खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बीना मगरले ‘अब दशैँ अगाडि नै मेलम्ची आउँछ आउँछ !’ भनेर निकै गर्वसाथ भन्नुभएको थियो । तर खोई मेलम्चीको पानी ? त्यसको काम ठप्प छ अहिले । ठेकेदार कम्पनीले सरकारलाई टेरेन, काममा ज्यादै हेलचक्राई ग¥यो र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ भित्रिने दिनलाई अनिश्चित पारिदियो । इटालियन कम्पनी सीएमसीले तीव्रताका साथ काम गर्ने र आगामी साउनभरिमा मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा खसाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सहमतिअनुसारको काम गरेन कम्पनीले । कुल २७ किलोमिटर लामो मेलम्चीको सुरुङ खन्ने काम कछुवा गतिले दशकौँ लगाएर सम्पन्न भइसकेको छ । अत्यन्त कठिन काम भनेको त्यही थियो । अब गर्नुपर्ने सुरुङका भित्री भागका काम मात्र हुन् । प्रत्येक दिन ३०० मिटरभन्दा बढी सुरुङ मर्मतको काम गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म ५० मिटर मात्र काम भएको छ । महिना दिनमा पचास मिटर मात्र काम गर्ने ठेकेदारले यही गतिमा काम गरे अब थप साठी महिना घाँटी सुकाएर बस्नुपर्नेछ राजधानीबासीले ।
मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनीका हरेक मागप्रति सरकार सकारात्मक र सहयोगी रहँदै आएको देखिन्छ । यसो हुँदाहुँदै पनि विविध अत्तो थाप्दै काम रोक्ने गरेको छ ठेकेदारले । अहिले भूकम्प र अन्य कारण देखाएर थप एक अर्ब ६५ करोड रुपियाँ सरकारले दिनुपर्ने माग गरेको छ । यसमध्ये २८ करोड रुपियाँ सरकारले भुक्तानी गरिसकेको भनेको छ । पहिलेका अस्थिर सरकारका पालामा जस्तै सरकारी आयोजनाको ठेक्का लिने कम्पनीले समयमा काम नगरी झुलाउने र अनेक नाजायज किसिमका क्षतिपूर्ति माग्ने प्रवृत्ति अहिले पनि यथावत छ । मेलम्ची मात्र होइन, यहाँका हरेक आयोजना ठेकेदारको यस्तै प्रवृत्तिबाट ग्रसित बनेका छन् । योजना सरकारबाट अतिरिक्त रकम असुलिरहने स्रोत बनाइएका छन् । काम लिने, भुक्तानी पनि प्रशस्त लिने तर सम्झौताअनुसार समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, उल्टै अनेक अत्तो थापेर सरकारलाई नै लाचार बनाउन खोज्ने स्वदेशी–विदेशी निर्माण कम्पनीको बिगबिगी छ । शर्तअनुसार काम नगर्ने, मात्र ओगटेर राख्ने, भेरियसन अर्डरका नाममा लागत बढाउँदै लैजाने तैपनि थपिएका समयभित्र पनि पूरा नगर्ने परम्परा कायम छ । स्वदेशी हुन् वा विदेशी, त्यस्ता निर्माण कम्पनी विरुद्ध सरकार अब कठोर हुनै पर्छ । मेलम्ची आयोजनाको ठेक्का लिने इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई सम्झौता र प्रतिबद्धताअनुसारको अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न बाध्य पार्नुपर्छ – सरकारले । नाजायज क्षतिपूर्तिको माग गरेको हो भने सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने र जायज रहेछ भने सकारात्मक रूपमा लिनु पनि पर्छ । दशैँ अघि जसरी हुन्छ काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याएर जनताको तिर्खा मेट्न सरकार सक्रिय भएर अघि सरोस् ।
मेलम्ची होस् वा अन्य सडक, पुल, सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण ठेक्का हात पारेर काम समयमा नगर्ने तर कहिले अदालतको आदेश, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय अवरोधजस्ता बहाना पारेर सरकारबाट उल्टै थप रकम दाबी गर्ने ठेकेदारसँग अब सम्झौताहीन रूपमा सरकारले व्यवहार गर्नु आवश्यक छ । हो विगतमा कतिपय अवस्थामा द्वन्द्व, पेट्रोलियम अभाव, बन्दहड्ताल आदि जस्ता कारणले पनि काममा विलम्ब हुन्थ्यो तर अब यी समस्या छैनन् । निर्माण सामग्रीको अभाव छैन । यसो भए किन विलम्ब र गुणस्तरहीन काम ? सरकारले विश्वाससाथ निर्माणको जिम्मेवारी दिएपछि पूरा नगरी उल्टो सरकारसँग थप समय र रकम दाबी गर्ने, पौँठेजोरी खेल्न खोज्ने प्रवृत्ति वास्तवमा राष्ट्रघातक हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ । यसमा सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा उत्रिएको देखिनुपर्छ । प्रतिबद्धता ‘गफै त हो सम्धी’ भनेजस्तो नहोस् । अन्यथा सरकारप्रतिको जनविश्वास ओरालो लाग्न सक्छ ।